Maxaa xiiso Si tabobaro Travel In Europe? | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Maxaa xiiso Si tabobaro Travel In Europe?
Qaadashada tareenka waa mid ka mid ah noocyada ugu underrated ah gaadiidka casriga ah. Sida Intercontinental diyaarad raacid noqon more la awoodi karo sannad kasta, laakiin tareenada ay soo badanayaan meel kasta. Waxaa jira sababo dhowr ah sababta safraya tareen waa mid ka mid ah siyaabaha ugu soo jiidasho leh si ay u gudbayaan xuduudaha caalamiga ah.
Tusaale ahaan, indhaha ku bixiyeen oo ay ku Bernina Express keliya ayaa ku filan si loogu badalo wax enthusiast airline galay xamaasadaysan tareenka a. Iskala ka CHUR iyo St. Moritz ee Switzerland bariga qurux badan in waqooyiga Italy ee Tirano, Bernina Express waxaa sidoo kale loo yaqaan ugu muuqaal dabiici ah safarka tareenka dunida oo dhan. safarkan u dhexeeysa guud ahaan 90 miles. macnaheedu waxa weeye in 4 saacadood ee filimada Bbc Alpine, glaciers, waterfalls weyn, iyo webiyada, riwaayado.
Dhammaan oo ka mid ah muuqaal qurux badan Waa la arki karo iyada oo Windows Vista deeqsi ah Express 'baabuur kasta rakaabka. safarka culminates at Bernina Pass. at 7,000 cagaha kor ku heerka badda, pass waa u nugul snowstorms hirarkii. Dhanka kale, qoraxdu Italy kuu sugnaaday dhamaadka kale ee safarka this. muuqaal dabiici ah Tani tareen kortaan waa in ay khasab in liiska baaldi lover kasta tareenada ee.
Dhanka kale, ku biiro kooxda Express ee ku jira liiska la DB ama Deutsche Bahn. network tareen qaranka Germany ayaa waxay bixisaa qaar ka mid ah raacid ugu muuqaal dabiici ah meel u dhow Rhine Webiga. waddooyinka ay ku qaadan doonaa iyada oo loo marayo views Garaaci ee Alps iyo dooxooyinka buurta. Tusaale ahaan, sida ugu wanaagsan ee la mahadiyo Europe wabiga ugu dheer waa via wadada isku xirta magaalooyinka dalka Mainz iyo Cologne. Wadadan aad qaadataa buuraha tur, dumi qalcado, iyo canab ah saf.
DB waxay bixisaa raacid tareen joogto ah kuwaasi oo ku xidha magaalooyinka sida Amsterdam, Copenhagen, iyo Prague in metropolises waaweyn ee Germany ee. Similar in Bernina Express, waa hab cajiib ah si ay u arkaan jibaaxa Yurub. Waa layaabna ma leh in CNN loola jeedaa Bahn Deutsche ah sida "Mid ka mid ah kuwa ugu wacan German-aragnimada safarka oo aan ku lug a Mercedes-Benz 450. " Iyadoo tareenada Europe ayaa inta badan qiimeeyeen ee cross-dalka dheer oo sodcaalladoodii cross-qaaradda, waxaa jira fursado kale oo gaaban u safraya more tareen caadi ah. Tusaale ahaan, ah Berlin Ringbahn ayaa mar walba ka mid ahaa oo caan ah dalxiisayaasha kuwaas oo doonaya fudud a meelaha la safar ee magaalada. Waxaad isku dayi kartaa this out for qiimaha ticket hal.
No sheekaysan jireen sodcaalladoodii oo tareen xiiso noqon lahaa dhamaystiran oo aan ku jiraan Trans-Siberian Express. Sidoo kale loo yaqaan ugu dheer safarka tareenka caalamka, ee Trans-Siberian Express xira Moscow ee galbeedka Russia in magaalada xeebta ah ee Vladivostok Bariga Ruush. Jidka, tareenada laamaha baxay dalalka u dhow sida Shiinaha, Mongolia, iyo North Korea. Dhowr goobood oo ku yaalla Western Europe, oo ay ku jiraan Amsterdam, waxay leeyihiin tareenada in dalab raacid saldhiga Trans-Siberian ee St. Petersburg, Russia. No yaab Yurub badan oo ay doortaan in ay tareenka marka aan foodda la bari.
Socdaalka Russia tareen waa mid ka mid ah siyaabaha ugu jaban in ay u safraan. siiyay, waxa kale oo ka mid ah län, la Ladbrokes sheegtay in tareen qarsoodiga ah habeen ka Volgograd in Nizhny Novgorod qaadataa 27 saacadood. weli, nidaamka tareenka ballaaran Russia ayaa arkay badan oo tallaabo sanadkan markii dalka marti Koobka Adduunka. Taageerayaasha Qaar badan ayaa si aad u aragto more of dalka iyo dadka ay sida ay u safray kulan tareen.
Tani waa arrin kale oo soo jiidasho leh oo inta badan iska fududaysto-of safarka tareenka. Dhab, wax la mid ah dadka ku jira iyo aragnimada aad la kulmi doonaa jidka. Hel diyaar u ah inay la kulmaan qaar ka mid ah dadka ugu soo jiidasho leh ka soo adduunka oo dhan. Hadba tareen cross-dalka safarka aad ku tahay, tahay badan tahay in la soo afjaro ilaa helo saaxiib ama laba ka mid ah dadka safarka habeenkii la shaqayn aad. Haddii aad qaadatid muuqaal dabiici ah Bernina Express, oo Toggooda soo dalal badan oo labada Bahn Deutsche ama Trans-Siberian Express, ama lagu nasto on Switzerland ayaa sitoos Express, oo Trip Dhaqanka ayaa ku tilmaamay safar dheer oo ay xafiiltamaan ee indhaha ee Bernina ah, Socdaal tareen ku xidhan tahay in uu noqdo mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu soo jiidasho leh ee noloshaada.
To get the best train experience in your life, at qiimaha ugu jaban iyo gargaartay ajuurada jaale isnacsiiyeen, isticmaalka Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/fascinating-train-travel-europe/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#transsiberian trainjourney tareen safarka traveltips
I am a private blogger, love trains & safarka, if you have spare time i would love if you comment on my posts, because it is important for me to get feedback from my readers, enjoy. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir